सासुआमा ! सधै चण्डाल्नी हुन्छे बुहारी - Sabaithari.com
सासुआमा ! सधै चण्डाल्नी हुन्छे बुहारी
– निमिषा त्रिपाठी
नेपाली समाजमा हरबखत सुनिने गर्छ बुहारी पनि छोरी जस्तै हुन् भनेर । मैले पनि सुनेकी छु । यसको अर्थ मैले कुनै सासुको खिल्ली उडाउन खोजेको होइन । हो, बुहारी पनि छोरी नै हो भन्दैमा कसरी हुन सक्छ बुहारी छोरी ? यदि बुहारी छोरी हो भने त तिम्रो खुट्टा ढोग्दा तिमिलाइ पक्का पाप लाग्छ होला, सासुआमा कि लाग्दैन ? आजसम्म कुन छोरीले आफ्नो बाबु आमाको पाउ मोलेको देखेकी छौ र तिमिले ? के तिम्रो छोरीलाई कहिल्यै तिमिले आफ्नो खुट्टा छुन लगाएकी छौ ?
समाजका हरेक बुहारीलाई बिवाहका केही दिन नबित्दै सयौं बर्ष झै लाग्छ किन ? सायद, बाबाआमा समान सासुससुरा पाएर होला कि ? श्रीमान बाट एउटी नारीले पाउनुपर्ने माया, साथ , सहयोग र हौसला प्रसस्त पाएर पो हो कि ? हरदिन क्षतबिक्षत् हुन्छ हर बुहारीको मन यहि प्रश्नले, के हो यो ? बस् म यस्को उत्तरको पर्खाइमा छु ।
समय बदलियो तर २१ ओं शताब्दीसम्म आईपुग्दा पनि हामी बुहारीहरुले सहने अन्याय र अत्याचार उहीँ र उस्तै छ । अनि हरदिन सोच्ने गर्छु पढेलेखेका सक्षम नारीले त शोषणको सिकार बन्नु परेको छ भने दिनरात के होला मुलुकका अनेकन् विकट बस्तीका अशिक्षित नारीको अबस्था ?
गाउँमा गाई बस्तु पालेर, घर–दैलो पोतेर आफ्नो जिन्दगी कटाएको तिमिलाइ के थाहा ? बिहान उठेर हतार हतार घरधन्दा गरेर अरुको काममा दिनभरी गएर साझ आउँनासाथ लुगा समेत नफेरी खाना बनाउन भान्सा पस्दा समेत नबुज्ने तिम्रो चित्त । माफ गर सासुआमा, सायद मैले बुझाउन सक्दिन ! सफा लुगा लगाएर छोरा बुहारी हिडेको देखेर के छ र तिमिहरुलाइ, यस्तो मस्ती भन्ने ? मैले यस्तो गरें उस्तो गरें भन्न बानी परेकी तिमी हाम्रो दिनभरीको थकान महशुश गर्न कहाँ सख्थेउ र ?
बिहान ५ बजेदेखि उठेर घण्टी बजाउने, पुजा गर्ने, भजन गाउने तिमिले मैले तिम्रो शरीर र पैतालामा लगाएको तेल, तथा अनेक थकान र पीडाका बीच बचेको समय तिम्रो रेखदेख को निम्ति खर्चेको समय कसरी बुझ्न् सक्छौ र तिमिले ? कैयौं रहर ,सपना , ईच्छालाई आफ्नै मन भित्रै दागबत्ती दिएर तिम्रो परिवारको लागि सुम्पेको जिन्दगीको मुल्य कसरी बुझ्न् सक्छ र तिम्रो परिवारले ? यति धेरै त्याग गर्दा पनि हरदिन रुनु पर्ने हामी बुहारी मान्छेले ? म भन्छु ,यदि भगवान छन भने तिमिले गर्ने पुजापाठ, धर्मकर्म सब् बेकार हुनेछ ।
हरेक छोरीलाई आफ्नो बाबाआमाले आफ्नै घरमा संस्कार सिकाएर हुर्काएका हुन्छन् । त्यो तिमीलाई पनि सायद् याद हुनुपर्ने हो । तिमीले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रा पक्कै सिकाएकी हौली । तिमिलाइ मेरो एउटा प्रश्न– के तिमीले आफ्नो सन्तान लाई नचाहिने संस्कार सिकाएर हुर्काएकी हौ त ? यदि थियौ भने तिमिले अरुलाइ भन्न सुहाउछ ? सक्ने भए मलाई यही प्रश्नको उत्तर देउ, सक्छौ ?
म कुनै धर्मको बिरोधी पक्कै पनि होइन । म पनि गर्छु पुजा, म पनि बस्छु व्रत , म पनि जान्छु मन्दिर । मलाई पनि मेरी आमालेसंस्कार, धर्म, अनुशासन, कर्तब्य सिकाएकी छिन् । तिमिले जस्तो दिनभरि पुजा पाठ गर्न न समय छ म संग, न म त्यो नाटक गरेर अरुलाइ देखाउन नै चाहन्छु । मैले यत्ति बुजेको छु कि भगवान सबैको मनमा छन् । सबैको राम्रो सोच्ने हो भने पुजापाठ गरिरहनु जरुरी छैन । पुजापाठ नगर्ने मान्छे कु–संस्कारी हुन्छ भन्ने तिम्रो बुझाइ पनि गलत हो । संस्कार भनेको के हो जुन तिमी जस्ता सासुहरुलाई रत्तिभर पनि थाहा छैन ।
मायाको अपेक्षा हामीले पनि राखेका हुन्छौं । हर नारीले बुनेका हुन्छन् सपना, मेरो श्रीमान यस्तो होस्, मेरो सासुससुरा यस्तो हुन, मेरो परिवार मिलेको भैदियोस् भन्ने चाहना सबै नारीलाइ हुन्छ । कुन नारीले आफ्नो घर बिगारु भन्ने सोच्छ होला ? कदापि सोच्दैन । दुनियाँमा नाटकीय पात्र बन्न कस्लाइ पो रहर हुन्छ र ?
आफ्नो छोरीहरुको बारेमा अप्रिय कुरा सुन्दा कस्तो खत्तम घर, मेरो देबी जस्तो छोरी नराम्रो घरमा परी भन्ने । तर, त्यस्तै परिस्थिति बुहारी लाई पर्दा हरेक बुहारीले पनि पक्कै नराम्रो सोच्ली भनेर अनुभूत गर्ने दिन् किन आउँदैन सासुआमा ? यी त सब् परका कुरा, तिम्रो नजरमा सधैं चण्डाल्नी हुन्छे बुहारी ।